Umkhandlu wonga imali ngokuvala izibiliboco emingcwabeni | News24
Umkhandlu wonga imali ngokuvala izibiliboco emingcwabeni
Durban - Kuvalwe izibiliboco nobukhazikhazi emingcwabeni yabantu abadla imbuya ngothi abangcwatshwa ngosizo lomkhandlu kamasipala waseKokstad ngenxa yezinga labo lenhlupheko elibabeka kwisimo sokuthi basizwe umkhandlu uma bengcwaba izihlobo zabo.
Imeya yaeKokstad uMnu Bheki Mtolo ukudalule lokhu esithangamini sabe zindaba ebesibanjelwe emkhandlwini nalapho ibiyocacisa ukuthi umkhandlu wabo usuzokhipha umgodi kuphela uma uthole ukuthi umndeni oshonelwe uthola imali engaphezulu kuka R 3360 uma imiholo yamalungu isihlanganisiwe.
UMnu Mtolo uthe indaba yokuthi umkhandlu ubhekane nazo zonke izindleko zemingcwabo isiphelile ngale kokuthi lowo mndeni ngempela kawuyitholi imali engaphezulu kwedalulwe ngasenhla.
Ukuqinisekisile ukuthi nabo banophenyo abalwenzayo ngoba batholile ukuthi iningi labantu bayaluxhaphaza uhlelo luka masipala olubizwa phecelezi nge-Indigent support grant ekuwuhlelo lwemali ebekwayo yokubhekelela izinkinga kumbe izinselelo zabahlwempu ekubalwa kuzo izinsiza zikagesi wamahhala kanye nezinye.
“Sesibophe abantu ababalelwa ku 1629 abazama ukukhwabanisa loluhlelo ngokusinikeza imininingwane ekungasiyona eveza ukuthi bahlwempu ukuze bahlomule ekutholeni kwizinsiza zamahhala esizinikeza abampofu nalapho kuye kuthi ekugcineni sithole ukuthi laba bantu uma sesiphenyisisa basebenza kahle nje futhi emizini yabo kupaka izimoto zika nokusho” kusho uMnu Mtolo.
Uthe abanye babantu abatholwa bebhalisele loluhlelo abasebenzi bomkhandlu, abakahulumeni kanye nabezinkampani ezinkulu ezizimele.
“Sesikulungele ukuvula amacala kodwa ke okusiphatha kabi ukuthi amacala esiwavula emaphoyiseni aseKokstad akahambeli phambili ngoba abantu babheka ukuthi lenziwe ubani lapho uma icala lingathinti imeya kumbe isikhulu esiphezulu uthole ukuthi kalinakwa” kusho uMnu Mtolo.
Uthe kwakulona loluhlelo lokungcwaba bathole ukuthi labo abanomasingcwabisane benzelwa yonke into kodwa babuye bafune okuningi emkhandlwini ngoba ngelithi bahlwempu.
“Sesibathintile omasingcwabisane abaningi basitshela ngezinto abahlinzeka ngazo imindeni eshonelwe nalapho sithole ukuthi bonke bakhipha okuningi okudingeka emingcwabeni thina nje manje sizobheka isimo somndeni sinhlangabezane nezonti thizeni ekufanele sibasize ngazo, hhayi ukuthi sibhekane nazo zonke izindleko” kuchaza uMnu Mtolo.
Uthe izinhlelo zomkhandlu eziyisibonelelo ezigcina zixhashazwa sezubaphoqe ukuthi basungule uhlelo lokulwa nenkohlakalo njengoba sebethule ngokusemthethweni inombolo yokumpimpa abantu abanza izenzo zenkohlakalo.
OLUNYE UDABA: Ushaqekile umndeni wowesifazane otholakale eshonile
“Sifuna umphakathi ube ingxenye ekubikeni imikhuba eyenziwa abasebenzi bethu ngoba empeleni kuyicala ukwazi izenzo zenkohlakalo kodwa ungazibiki kumbe uze nazo ngaphambili. Siphelile ke manje isikhathi sokulokhu kuthiwa imeya idla imali, sifuna abantu beze ngaphambili kodwa labo abangamagwala sizobavikela njengoba sizoba nendlela evikelekile esizosebenza ngayo” kusho uMnu Mtolo.
Uthe inkohlakalo edlangile kuleli ixhaphaza kakhulu abahlwempu ngoba ukukhuphuka kwentela nokwehla kwemali ebhekelela ingqalasizinda kwenziwa ukuthi uhulumeni udonso kanzima ezimalini ngoba iningi layo iyantshontshwa.
UMnu Mtolo uthe okubaphatha kabi ngamaphoyisa aseKokstad ukuthi amacala abawavulayo bewavulela abakhwabanisi kawahambeli phambili iningi lawo agcina enyamalala nokuthi kuyabhekwa ukuthi icala lithinta bani, kufakwe kakhulu ingcindezi kulawo athinta izikhulu, lawo awabasebenzi abasezikhundleni ezisezansi kawanakwa.
Uhambisa athi ngoLwesihlanu bazozulazula edolobheni nase malokishini baqwashise abantu ngenkohlakalo nobungozi bayo ngoba empeleni ngesinye isikhathi inkohlakalo iqalwa abantu abathanda ukugwazela abasebenzi baka hulumeni igcine igcine isingasagwemeki.
Umkhandlu waseKokstad ukwe wabhekana nesimo senkohlakalo lapho kwagcina kuxoshwe inqwaba yabasebenzi ekwatholakala ukuthi badle izigidi.
Inombolo ethulwe ngokusemthethweni yokubika inkohlakalo ithi 010 593 0835 kumbe ubhalele kuleli kheli: